Trump “Aniga ayaa dadka ugu caqli badan” - BBC News Somali
Image caption Trump ayaa sheegay in uu isaga ugu caqliga badanyahay dadka
Balse sidaas oo ay tahay Trump wali ma uusan sheegin inta uu la'egyahay caqligiisa.
Halbeegga caqliga lagu cabiro ee loo yaqaano IQ ayaa waxaa lagu qiimeeyaa inta uu la'egyahay qofka garaadkiisa kadib markii uu ka qeybqaato tijaabo su'aalo lagu weeydiinayo, waxayna ku xirantahay sida hufan ee dhaqsiyaha badan ee uu qofka uga jawaabo.
Tusaale ahaan su'aalaha waxaa ka mid ah tan hoos ku qoran.
Image caption Winston Churchill (Ingiriiska), Franklin D Roosevelt (Maraykanka) , iyo Joseph Stalin (Ruushka) oo wada fadhiya sanadkii 1945
"Xaakimkii maxkamadda sare Oliver Wendell Holmes ayuu ahaa ninkii yiri Madaxweyne Franklin Delano Roosevelt caqligiisa waa kan darajada labaad, balse dabeecadiisa waa darajada koowaad" ayay intaas ku dartay. "Sidaasi oo ay tahay Roosevelt waxaa doortay wax ka badan saddex meelood labo meelood ergada" ayay intaas sii raacisay.
Si kasta oo uu caqliga Trump u badanyahay ama u yaryahay taas micnaheedu ma ahan in uu ku guuleysan karo tijaabada IQ-ga sida uu qabo Dr Lawlis oo yiri "Xitaa dadka aan qabno in ay ugu caqliga badanyihiin sida Einstein oo kale waxaa laga yaabaa in aysan ku guulaysan tijaabada IQ-ga, sababtoo ah waxa ay ka fikaan wax maskaxdeena ka taloowsan".
"Waxaa laga yaabaa in uu dhawr jaawaabood ka fikiro marka hal su'aal la weeydiiyo" ayuu intaas raaciyay.
Mensa oo ah hay'adda u xilsaaran tijaabooyinka halbeegga caqliga ayaa Trump ku marti qaaday in la miisaamo caqligiisa si loo caddeeyo in uu ka caqli badanyahay Tillerson.
Donald Trump: Maraykanka 'waa inuu balaariyaa awooda hubkiisa nukliyeerka'
Trump oo Obama ku eedeeyay dibadbaxyada ka dhanka ah maamulkiisa